Recovery MP4 File - Ladnaansho MP4 Files Si fudud oo waxtar leh
> Resource > MP4 Recovery> MP4 File: Ladnaansho Khasaaray Your MP4 Videos
MP4 video files waxaa taageera qalab kala duwan oo kala duwan sida kamaradaha, PSP, iPod, telefoonada gacanta iwm Marka ay dadka isticmaalaan qalabka sida ruuxaanta kaydinta kuwa si loo badbaadiyo files MP4, ay oggolaan inuu ka ka soo gaartay xog qalad ah sida khasaaro xogta ku kaydsan drive adag ee . Marka files MP4 ma meeshii ay ahaadaan, ma u maleynayo in files MP4 aad ayaa waxaa si joogto ah tirtirayaa. Dhab ahaantii, waxa aad awoodi kartaa inuu ka soo kabsado faylasha MP4 lumay la jidadka toosan.
Haddii aad files MP4 lumay markii hore ku kaydsan on your computer, waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa inuu hubiyo wax Recycle Bin. Haddii aad iyaga tirtiray oo ma u faaruqiso Recycle Bin, waxaad si fudud u heli karaan faylasha MP4 lumay adigoo gujinaya "Soo Celinta files kuwaas" ceshan files MP4 in ay goobta asalka ah. Haddii aad u badbaadiseen files MP4 lumay on qalab kale, waxaad weli fursad uu ku sameeyo dib u soo kabashada file MP4 si fudud oo waxtar leh markii aad leedahay software awood Recovery MP4.
Sababaha khasaaraha file MP4:
Bannee bin recycle ah, ama wax miiran ah "amarka + tirtirto" in ay tirtirto MP4 si joogto ah;
Cudurka Virus of videos MP4;
Dhexgelin awood lama filaan ah on your computer;
Musuqmaasuqa ruuxaanta kaydinta;
Wondershare Photo Recovery software waa qalab sida sahlan oo lagu kalsoonaan karo, taas oo kaa caawin kara inaad dib u hesho tirtiray, formatted, burburin oo laga badiyay files MP4 ka drive adag ama xijaab. Download software iyo raac tilmaan inuu ka soo kabsado files MP4 3 kaliya tallaabooyin on Win. Hadii aad barnaamijka ku nidaamka Mac, doorato in aad kala soo bixi version Mac inuu ka soo kabsado files MP4 la tallaabooyinka la mid ah.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada file MP4
Orod on software kabashada file MP4 ah. Dooro dhexdhexaad ah lagu kaydiyo halkaas oo aad files MP4 lumay helo ka camera digital, kaadhka xusuusta, darawalka USB ama qalab kale oo lagu kaydiyo ballaaran oo darawal gudaha adag ka. U hubso in qalabka in aad rabto in iskaan lagu hayaa xirmaya your computer.
Talaabada 1: Dooro Risaalo meesha aad files MP4 khasaaro
Laga soo bilaabo liiska halkan drives macquulka ah, doortaan xijaab mid ka mid ah ama drive ka oo aad files lumay ay helaan, ka dibna riix "Scan" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka. Haddii aad u baahan tahay oo keliya inuu ka soo kabsado files MP4, halkan waxaan ku soo jeedinaynaa in aad heer sare si ay u isticmaalaan "Filter Options" oo aad u saamaxaaya in ay yaraadaan markii iskaanka iyo si fiican u heli faylasha MP4 lumay.
Talaabada 2: Sawirka iyo hesho files MP4 lumay
Ka dib markii iskaanka, faylasha MP4 lumay la tusay doonaa folder ku tagay si aad u doorato, halkan oo dhan fayl ku qoran yihiin qaabab file. Waxaad awoodaa inaad ku eegaan iyo soo qaado faylasha MP4 in aad rabto in aad soo kabsadaan ka dibna riix "Ladnaansho" ah.
1. Ku qor magaca faylka ama shaandhayso natiijooyinka raadinta in ay si hufan u heshid files lumay waqti gaaban.
2. In geeddi-socodka iskaanka ah, waxaad riixi kartaa "hakinta" ama "la joojiyo" marka aad maamuli in la helo files lumay oo ay qorshaynayaan in ay u soo kaban sida ugu dhaqsaha badan. Markaas waxaad sii wadi kartaa in ay ku eegaan faylasha kale haddii loo baahdo.
3. Riix "Save Scan" badhanka si loo badbaadiyo natiijada iskaanka si aad awoodi kartaa in ay sii wadaan soo kabashada video waqti kasta oo aad jeceshahay.
Talaabada 3: Dooro gal badbaadin in uu kaydiyo faylasha MP4 ka dib
Save files MP4 in waxay yihiin meel aad ku cad, oo guji "Ladnaansho". Halkan waxaan ku heer sare waxaad ku talinaynaa in ay doortaan meelo kale oo ka asal qoruhu aad meesha aad badiyay files MP4 ah.
Markaas, waxa aad awoodi kartaa in la helo files MP4 ee folder aad cayimay. Ka sokow files MP4, waxaad soo kaban karto, ku dhowaad dhammaan videos aad tirtiray, iyo sidoo kale sawiro iyo music.
Video tutorial soo kabashada file MP4
Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii Data Error Qaabka USB
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga HP Flash eryi
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray CR2 Photos
Muxuu MP4 File Leh Sound No?
FLV vs MP4, FLV farqiga u dhexeeya iyo MP4
Sida loo Beddelaan MP4 M4V in la Loss Tayada Zero
Sida loo Beddelaan OGG in MP4 la Zero Tayada Loss
Sida loo Beddelaan MP4 in Mpg la Loss Tayada Zero
Sida loo Download Dailymotion in MP4 leh tayo sare leh?
Sida loo Beddelaan VHS inay MP4 on Mac iyo Windows
Top 5 Best komberesarrada Video MP4 Free